दूधमा पनि अखाद्य वस्तु !
दूध र दूधजन्य पदार्थमा नेपाल केही समयअगाडिबाट नै आत्मनिर्भर रहेको छ। यसरी आत्मनिर्भर रहेको र सहज पहँुचमा पुगेको खाद्यपदार्थको गुणस्तरमा भने आवाज उठाउने अवस्था देखा परेको छ। दूधमा उपभोक्तको स्वास्थ्यमा
यसरी अडिएलान् त विद्यार्थी !
नेपाल माचारपत्रको गत ७ गतेको अंकमा ईश्वरराज ढकालले लेख्नुभएको शिक्षासम्बन्धी समाचार पढेपछि केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई विविध सुविधाबारे समाचार आइरहँदा विद्यार्थी भने विद्यालय पहुँचबाहिर
बालबालिकालाई उचित शिक्षाको खाँचो
हरेक मानिस शरीरको विभिन्न चरण पार गर्दै जान्छ । शारीरिक विकासक्रमसँगै मानसिक विकासमा पनि प्रत्यक्ष परिवर्तन र प्रभाव पर्दै जान्छ । जीवनका विभिन्न चरणमध्येको अत्यन्त संवेदनशील उमेर समूह मानिन्छ– किशोरावस्थालाई
सरकारले कृषिक्षेत्रलाई कहिले महत्व देला ?
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । देशको कृषिक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ । बढी मेहनत, कम उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिफलकै कारण कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै
मिदिम खोलाको समस्या तत्काल समाधान होस्
लमजुङको करापुस्थित मिदिम खोलाबाट ३.३ मेगावाटको बिजुली बलेपछि विवाद निकालिएको छ । युनियन हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादन भएपछि विवाद शुरु गरेर लफडा भएको छ । आयोजनाले
ज्येष्ठ नागरिक भगवान् हुन्
जीवनको उत्तराद्र्धमा जीवन व्यतीत गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरु राज्यका अमूल्य गहना र जिउँदा इतिहास हुन् । उनीहरुको जगेर्ना र सम्मान गर्ने दायित्व राज्यको हो । पछिल्लो समय केही सामाजिक संघसंस्थाले परिवार,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले सिक्नुपर्ने पाठ
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नेपालीको धेरै आशा रहेको छ । आयोजना सम्पन्न हुने वा नहुनेमा आशंका उब्जिरहने अवस्था छ । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र पर्ने गरेको
ओली सरकार ! किन जनतालाई करको सास्ती ?
चुवावमा मत माग्न जाँदा धेरै आश्वासन दिएको वामपन्थी पार्टीको सरकारले अहिले करआतंक मच्चाएको छ । अहिले गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म करआतंक व्याप्त छ । चुनावपश्चात् करको भार केही बढ्ने आँकलन गरिए पनि
नबुझी कानुनको विरोध नगरौं
नेपालमा भर्खरै धेरै किसिमका कानुन जारी भएर लागू भएको अवस्था छ । कानुनलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेर विरोध तथा समर्थन गरिएको पनि पाइएको छ । कानुनलाई पहुँचको आधारमा, राजनीतिक आस्थाको
गरिबलाई सुलभ स्वास्थ्य कहिले ?
नेपालमा गणतन्त्र आएको धेरै समय भइसकेको छ तर जनताले अनुभव गर्ने गरी गणतन्त्र आएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्दा, अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर बिरामीलाई अलपत्र छाड्नुपरेको खबर हालसालै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक
कोटेश्वरमा सधैँ ट्राफिक जाम, वैकल्पिक उपाय किन खोजिँदैन ?
हिजोआज काठमाडौंको कोटेश्वर क्षेत्रमा सधैँ ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । यहाँको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न ट्राफिकले जति नै मरिहत्ते गरे पनि कम हुन सकेको छैन । काठमाडौंको तीनकुनेदेखि भक्तपुरको
कर्मचारी कामचोर नबने देश बन्छ
नेपालको हरेक संरचना र क्षेत्र कर्मचारी संयन्त्रबाट संचालित छ । जनप्रतिनिधि भएपनि हरेक गतिविधि र निर्णायक तहमा कर्मचारीकै हालीमुहाली हुन्छ । नेपालका सरकारी कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्ति, ढिलासुस्ती र अनियमितताका अनगिन्ती
नेपाली समाज कस्तो भयो ?
आमा बाबुबाट सम्तान र सन्तानबाट आमाबाबु । आफन्तबाटै आफन्त असुरक्षित हुने अवस्था आएको छ । हामीले सभ्य, न्यायपूर्ण र सुरक्षित समाजको परिकल्पना गरेको दशकौँ भइसकेको छ । तर कुनै न
प्राकृतिक विपत्मा सचेत हुन जरुरी
पानी पर्न बन्द भएको छैन । अझै बाढीपहिरोको त्रास कायमै छ । मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार नेपालमा वर्षादमा सक्रिय हुने मनसुन यो वर्ष पनि औसतमा सक्रिय भएको छ
कार्यालय खारेजसँगै भद्रगोल अवस्था
सरकारी कार्यालय व्यवस्थित बनाउन नसक्नु अहिले ठूलै समस्या र चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । राज्यको पुनः संरचनासँगै जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयहरु खारेज भएका छन् । केही कार्यालयको नाम परिवर्तन
खानपिनमा ध्यान दिऔँ, स्वस्थ बनौं
स्वास्थ्य सबै थोक हो । स्वास्थ्य बैभन्दा ठूलो धन हो । स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । शरीर स्वस्थ रहे धन कमाउन सकिन्छ । शरीर अस्वस्थ भएपछि धन खर्चेर पनि
तीजमा रत्यौली कि वेदनाका गीत ?
यति बेला नेपाली सांगीतिक बजारमा दिनकै दर्जनभन्दा धेरै तीजका गीतहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । २०७५ सालको तीज पर्वको अवसर पारेर गीत सार्वजनिक गर्ने होड नेपाली सांगीतिक बजारमा चलेको छ ।
सरकारको ध्यान सुशासनमा जान जरुरी
देशमा सुशासन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । सुशासन लोकतन्त्रको सुन्दर र महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । सुशासनको जगमा टेकेर नै देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउँछ । समृद्धिको सपनालाई
जनप्रतिनिधिको कामको समीक्षा खोइ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको अहिले करिब डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ। डेढ वर्षसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। समीक्षासँगै कसरी स्थानीय सरकारका कामहरू प्रभावकारी हुन
सफल छन् मेलमिलाप केन्द्र
जटिल प्रकृतिबाहेकका अन्य मुद्दा पछिल्लो समय समाजमा नै मिल्ने गरेका छन्। समुदायमा रहेको सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र तथा स्थानीय न्याय सम्पादन समितिले घरयासी मुद्दामामिला मिलाउने गरेका छन्। अदालती झन्झटबाट मुक्ति पाउने